Akụkọ - Etu esi emepụta Igwe Ọdụdọ Sody Sita nke Neodymium?
Sintered NdFeB magnetbụ ihe alloy magnet mere fromNd, Fe, B na ihe ndị ọzọ nwere ígwè. Ọ bụ ya na ndọta magnetik kachasị ike, mkpali na-amanye ndị mmadụ n'ike. Ọ na-ọtụtụ-eji mini-Motors, ifufe generators, mita, sensọ, ọkà okwu, magnetik nkwusioru usoro, magnetik nnyefe igwe na ndị ọzọ na ulo oru ngwa. Dị mfe corrosion na iru mmiri gburugburu, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka ime elu ọgwụgwọ dị ka ndị ahịa 'chọrọ. Anyị nwere ike ịnye mkpuchi, dịka Zinc, Nickel, Nickel-copper-nickel, Silver, gold-plating, Epoxy mkpuchi, wdg ọkwa: N35-N52, N35M-48M, N33H-N44H, N30SH-N42SH, N28UH-N38UH, N28EH-N35EH
Usoro nke Nrụpụta Igwe Ọdụdọ Neodymium Sintered
A na-ekpughe ihe ndị magnetik na ọla ndị ọzọ na etiti oge ma gbazee na ọkụ ọkụ.
Mgbe emechara usoro usoro dị iche iche, a na-etinye ingots n'ime ahụ nke nwere ọtụtụ microns na nha. Iji gbochie oxidation ime, obere ahụ na-echebe site na nitrogen.
A na-etinye ihe ndị magnetik na jig ma tinye ebe magnetik ebe a na-etinye ihe ndị na-emepụta ihe n'ụdị. Mgbe mbụ shaping, mmanụ isostatic ịpị ga-aga n'ihu na-etolite shapes.
A na-etinye ihe ndị magnetik n'ime ingots nke etinyegoro ma a ga-ekpo ọkụ na ọkụ ọkụ. Njupụta nke ingots ndị na-ebute naanị 50% nke ezi njupụta na nsị. Ma mgbe emechara, ezi njupụta bụ 100%. Site na usoro a, nha nke ingots fọrọ nke nta ka ọ belata 70% -80% na olu ya na-ebelata site na 50%.
E debere akụrụngwa magnetik mgbe emechara usoro ahụ. Edere ihe ndị dị mkpa gụnyere nsị nsị nsị, ike mmanye, na ngwaahịa kachasị ike.
Naanị ihe ndị ahụ gafere nyocha ahụ ka ezigara na usoro ndị na-esote, dị ka ịkpụzi na ikpokọta.
N'ihi ịda mbà site na nsị nsị, a na-enweta nha ndị achọrọ site na ịwe igwe ndọta na abrasives. A na-eji abrasives diamond maka usoro a n'ihi na magnet siri ike.
Iji kwekọọ na gburugburu ebe ha ga-eji mee ihe, a na-edozi magnets dị iche iche ọgwụgwọ elu. Nd-Fe-B magnet na-enwekarị ike ime nchara na ọdịdị a na-emeso dị ka magnet NiCuNi, Zn, Epoxy, Sn, Black Nickel.
Mgbe emechara, ihe ndị metụtara ya na nyocha anya ga-eme iji gosipụta ọdịdị ngwaahịa magnet anyị. E wezụga nke ahụ, iji hụ na nkenke dị elu, ọ dịkwa anyị mkpa ịnwale nha iji chịkwaa ndidi.
Mgbe ọdịdị na nha ndidi nke ndọta ruru eru, ọ bụ oge ka magnetization magnetik direction.
Ihe na-esote nyocha na ndọta, ndị ndọta dị njikere iji igbe igbe, ọbụlagodi pallet dị ka ihe ndị ahịa chọrọ. Magnetik Flux nwere ike ikewapụ site ígwè maka ikuku ma ọ bụ awara awara anapụta okwu.
Post oge: Jan-25-2021